Odayaasha gobolka Gedo oo dalbaday in la sii daayo Col Irad - SomaliNet Forums
Postby CoolPoisoninthisbijj » Sat Aug 09, 2008 2:37 am
Baaq ay si wadajir ah u soo saareen duqowda dhqanka iyo waxagaradka gobolka Gedo ayey ku dalbadeen in sida ugu dhaqsaha badan loo sii daayo oo xoriyadiisa dib loogu celiyo Col: Iraad Maxamed (Calooley) oo koox hubeysan oo aan la garan ay deegaanka Dhoobley ku afduubteen bishii hore.
Baaq ay ku saxiixnaayeen inka badan 40 hoggaamiye dhaqameed oo isugu jira Salaadiin, Ugaasyo, Nabadoono iyo duubab dhaqan oo kale oo laga soo saaray inta badan degmooyinka gobolka Gedo ayaa lagu codsaday in lagu sii daayo Col: Iraad Calooley oo ku xiran miyiga Dhoobley, bayaanka ayaa lagu xusay in xaq darro iyo wax aan la fiirsan karin ay tahay in si sharc darro ah oo waliba sida qoraalka u dhigayo lagu heysto muwaadhin Soomaaliyeed oo aan cadeyn dambiga lagu taxaabay.
Odayaasha dhaqanka baaqa soo saaray ayaa ka codsaday beesha ay ka soo jeedaan kooxaha gacanta ku haya sargaalka xiran in ay soo furdaamiyeen iyagoo tixgelinayo sida ka muuqato bayaanka muslinimada, Soomaalinimada iyo deriska la wadaago, waxay beesha Absame waxgaradkooda meel kasta oo ay joogaan ugu baaqeen in ay ka hortagaan deegankoodana ka ilaaliyaan nasiib darro ay kooxaha haya Iraad Calooley u soo hoyin karan beeshaasi waa sida lagu tibaaxay baaqa ay soo saareen odayaasha gobolka Gedo.
Col: Iraad Maxamed Cali (Calooley) oo ah sargaal horay uga tirsanaan jiray maamulkii Isbaheysiga Dooxada Jubba ayaa laga qabtay deegaanka Dhoobley 27-ka bishii hore kadib markii lagala degay gaari uu lahaa oo ka yimid magaalada Ceelwaaq, markii dad ugu war dambeysay waxaa la sheegay in kooxaha xirtay ay la aadeen dhulka dhanka miyiga kaga beegan Dhoobley, lama ogaan karo waxa ay xaaladiisa ku sugan tahay, waxaana horay u guuldareystay isku daya lagu doonayey in lagu soo daayo.
Maxamed Qani Xuseen (Kuus), Gedoweb Beledxaawo.
http://www.gedoweb.com/index/modules.ph ... le&sid=641
Re: Odayaasha gobolka Gedo oo dalbaday in la sii daayo Col Irad
Cagdhers why do U kidnap?
Odayaasha gobolka Gedo oo cambeeray dilal ay geysteen Ahlu S
by grandpakhalif » Sat Mar 26, 2011 9:24 am » in Provinces - Gedo
Odayaasha Hawiye oo C/llaahi Yuusuf ka dalbaday inuu uga soo
by Hiiraan boy » Sun May 20, 2007 5:19 am » in General - General Discussions
Sun May 20, 2007 5:36 am
Sultan Maxamed, Sultan Abduqadir OO Ka Dalbaday Odayaasha Re
by Ducaysane_87 » Tue Jul 14, 2009 8:08 am » in Politics - Somaliland
Odayaasha gobolka Mudug oo soo dhamaystiray
by sheekh-Farax-zero » Fri Aug 21, 2009 4:46 am » in Politics - Puntland
Fri Aug 21, 2009 4:46 am
ONKOD ROOBKO MA DAAYO ANA QAYLO MA DAAYO..
by HELWAA » Sat May 09, 2009 2:25 pm » in General - General Discussions
Odayaasha & Isimada Gobolka Ceyn oo qaatay shir
by FBISOMALIA » Wed Feb 02, 2011 1:31 pm » in Provinces - Sool
Odayaasha Gobolka Awdal denounce xisbiiga Kulmiye
by Siciid85 » Thu Apr 19, 2012 10:40 am » in Politics - Somaliland
by FBISOMALIA » Wed Feb 02, 2011 1:27 pm » in Politics - Puntland